पाँच महिलाले आप’त्तीजनक भिडियो बनाएर २० नेता–सरकारी अधिकृतबाट उठाए २४ करोड – ईमेची डटकम
पाँच महिलाले आप’त्तीजनक भिडियो बनाएर २० नेता–सरकारी अधिकृतबाट उठाए २४ करोड
Posted byइमेची संवाददाता September 21, 2019 October 30, 2019 Leaveacomment on पाँच महिलाले आप’त्तीजनक भिडियो बनाएर २० नेता–सरकारी अधिकृतबाट उठाए २४ करोड
एजेन्सी । भारतको मध्यप्रदेशका कयैन नेता र सरकारी अधिकृतलाई व्ल्याकमेल गरेर करोडौँ उठाउने पाँच महिला प’क्राउ परेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा ती महिलाहरुबाट अनौठा सूचनाहरु प्राप्त भएको छ ।
तिनलाई प’क्रनको लागि प्रहरी र आत’कं’वाद विरोधी स्क्वाड (एटीएस)को प्रयोग भएको थियो । अनुसन्धानका क्रमले ती पाँच महिलाले झण्डै २० जनालाई आफ्नो जालमा फँसाएर तिनको आ’पत्ती’जनक भिडियो बताएको र ती भि’डियो इन्टरनेटमा हालिदिने धम्की दिएर तीबाट १५ करोड भारु उठाएको देखिएको छ ।
तिनले आफूले शिकार बनाएका धनाढ्यबाट ५० लाखदेखि तीन करोड भारुसम्म उठाएको पाइएको छ । प’क्राउ परेका महिलाका मोबाइल जाँचमा करिब ९० आप’त्ति’जनक भिडियो पनि प्राप्त भएको छ ।
दशैमा रमाइलो गरौं , मासु खानेले खाउँ ,नखानेले नखाउं,तर काटमारको तस्बिर सामाजिक संजालमा नराखौ???
यसमध्य ३० भिडियोमा आईएएस, आईपीएस अधिकारी र नेताहरुका छन् । प्रहरीले तिनलाई प’क्राउ नगरेको भए पनि फोरेन्सीक जाँच सिफारिस गरेको छ ।
यस प्रकरणमा थप ५–६ युवती सामेल रहेको विश्वास गरिएको भए पनि यसका मुख्य व्यक्ति श्वेता जैन विजय र श्वेता जैन स्वम्निल मानिएका छन् । ती दुईसँगै बरखा अमित सोनीलाई एक निगम इन्जिनियरबाट ३ करोड मागेको आरोपमा जे’ल पठाएको छ ।
अन्य आरोपीहरु आरती दयाल, छात्रा मोनिका यादव र ड्राइभर ओम प्रकाशलाई सेप्टेम्बर २२ सम्म इन्दौर प्रहरीको हि’रास’तमा राख्ने अनुमती दिएको छ ।
यी महिलाको फन्दामा पर्ने धेरै जसो अधिकारीहरु राज्यका इन्दौर र भोपाल क्षेत्रका छन् । ती महिला त्यस क्षेत्रको क्लबमा आउने जाने गर्ने र त्यहीँ आउ जाउन गर्ने सरकारी अधिकारीलाई फसाउने गरेको खुलेको छ ।
प्रदेशका शिर्ष आईएएस अधिकारी र इन्दौर नगर निगमका इञ्जिनियरसँग भएको हनी ट्रापलाई प्रहरीले एक संगठित अ’परा’ध मानेको छ ।
सरकार र प्रशासनका शीर्ष अधिकारी संलग्न भएका कारण भारतको आ’तंक’वाद विरोधी एजेन्सीले नै यसको अनुसन्धान थालेको थियो । देशका गोप्य सूचना थु’त्न आ’तंक’वादीहरु पनि यस्तो कार्यमा प्रयोग हुन सक्ने आशंकामा १५ सदस्यीय एटीएस परिचालन भएको थियो ।
हनी ट्रयापमा संलग्न महिलाहरु लेट नाइट पार्टीका सौखिन छन् । तिनका मोबाइल फोनमा त्यस्तो पार्टीका कयैन भिडियो भेटिएको छ ।
धेरैजसो पार्टी भोपाल–इन्दौर चार लेन सडकको दायाँवायाँ रहेका रिसोर्ट, होटल वा फार्म हाउसमा हुन्थ्यो । तिनमा आईएएस–आईपीएस अधिकारलाई पनि बोलाइन्थ्यो ।
Posted byइमेची संवाददाता September 21, 2019 October 30, 2019 Posted inपत्याउनै गाह्रो
देउवाप्रति भद्धा मजाक गर्ने राष्ट्रपतिलाई आइलाग्यो आपत, सामाजिक सञ्जालमा उल्टै लखेटिइन् !
नारायणगढ–मुग्लिङ्ग सडकबाट एकाबिहानै आयो दुखद खबर